[Akhriso] Afar qodob oo ay kuheshiiyeen Farmaajo iyo Abiy | Wardoon
Home Somali News Afar qodob oo ay kuheshiiyeen Farmaajo iyo Abiy
[Akhriso] Afar qodob oo ay kuheshiiyeen Farmaajo iyo Abiy
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa war kooban ka soo saaray wada hadalo magaalada Addis Ababa ku dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed, iyadoo qodobada qaar ay mugdi badan ku jiraan.
Goor sii horeysay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa qoraal kooban oo lagu qoray barta Twitter-ka waxaa lagu sheegay in wada hadalada u socda Madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal, amniga Gobolka iyo sidii loo dardar gelin lahaa is dhex galka dhaqaalaha Geeska Afrika.
Hase ahaatee qoraal lagu qoray barta Twitter-ka Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen afar qodob oo muhiim ah, kuwaasoo kala ah;
1- Xoojinta nabadda gobolka ee heshiisyada horay loo saxiixay
2- Xoojinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya iyo farsamooyinka lagu hubinayo
3-sii wadida horumarinta dekedda wadaagga ah (Lama magacaabin Dekedaha ay yihiin)
4- Xaqiijinta xiriirka maamulka Somaliland ee taageerada nabadda gobolka.
Ma jirto faah faahin intaan ka badan oo laga bixiyay kulankan, iyadoo Madaxtooyada Villa Soomaaliya aanay si rasmi ah u faah faahin qodobada laga hadlay oo mugdi badan ku hoos jira.
Heshiisyadii uu horay Madaxweyne Farmaajo la galay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya iyo heshiiskii saddex geesoodka ayaa shaki badan la geliyay, iyadoo aan la horkeenin Baarlamaanka, sidoo kale Baarlamaanka ayaa horay u diiday heshiiskii Dekeda Berbera ee dhex maray Somaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, waxaana la sheegaa in Madaxweyne Farmaajo aanu saxiixin qaraarkii Baarlamaanka Soomaaliya uu ku diiday heshiiskaas.
Previous articleHaweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee dalka Mareykanka +VIDEO
Next articleDAAWO:- Ninkii Gabadha Kufsaday ee dilay oo asna Latoogtay
Abiy Ahmed“Kama carareyno dalka, sidii Mingiste ”
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Jubbaland oo kudagaalamay Balad Xaawo+ SAWIRRO